Cilmi baare u dhashay dalka Turkiga ayaa soo saaray Muraayad Furmaysa marka qofku dhoola cadeeyo keliya . – Idil News
Cilmi baare u dhashay dalka Turkiga ayaa soo saaray Muraayad Furmaysa marka qofku dhoola cadeeyo keliya .
Cilmi-baare Turkiga u dhashay oo lagu magacaabo Birk Elhan ayaa sameeyey muraayad cajiib ah oo muujisa wejiga qofka isticmaalaya keliya marka uu dhoola cadeeyo. Wareysi telefishanka CNN uu siiyay Mr.Elhan ayaa sheegay in muraayadda loo sameeyay si gaar ah si loogu dhajiyo gidaarka ku beegan wajiyada bukaanka kansarka qaba oo inta badan murugo ku jira.
Waxaa diyaariyey cabdirisaaq jubba